Huddle Na-eme Ka Ntanetị na Ntanetị na Mfe
Lingchụpụ ma ọ bụ ịhazi mgbasa ozi ahịa na-agụnye njikwa ọdịnaya na mmechi mmechi. Echere m na ike gwụrụ gị na ịme mgbanwe na-adịghị agwụ agwụ na VPN ma ọ bụ nhazi firewall iji kwado mmekorita ka ukwuu! Ohere inweta bụ na ị na-eji intranet na-abaghị uru ma ọ bụ SharePoint. Gagharị na ahụmahụ na-enweghị ntụpọ nke igwe ojii ahụ dabeere nọkọta oghere ọrụ na-enye ga-eme ka mmekorita na njikwa ọdịnaya bụrụ ihe na-atọ ụtọ karịa ihe na-agwụ ike na akwara na-eme ugbu a.
Ejiri ụzọ ziri ezi, nọkọta nwere ikike iji dochie email dị ka de facto faịlụ nkekọrịta na ịmekọrịta mmekọrịta. Ọ na-enye nhọrọ ngbanwe iji mepụta, chekwaa ma kesaa dọkụmentị, na-enye ohere ka mbadamba ma ọ bụ mkparịta ụka, na-eme ka iso ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'otu akwụkwọ ahụ mgbe ị na-edekọ nsụgharị ma ọ bụ mgbanwe na ijikwa arụmọrụ, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ na-etinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ njikwa ọrụ ọ bụla, ka ijikọ ekwentị na nzukọ vidiyo, yana ngwa mkpanaaka.
Huddle na-enyekwa Huddle Sync, iji nyere gị aka jikwaa ụlọ ọrụ gị faịlụ nwere ọgụgụ isi, ọ bụghị naanị ịmekọrịta ha. Kwadoro site na teknụzụ na-echere amụma, ọ na-ahọrọ faịlụ na akpaghị aka ga-amasị gị.
Ndebanye aha dị ngwa ma dịkwa mfe, yana ụlọ ọrụ ahụ na-enweta Huddle URL pụrụ iche na ibe nbanye na nkeji ole na ole. Onye ọrụ ahụ na - egbochi ohere ọ bụla na ngalaba omenala ọ bụla ma ọ bụ na ebe ọrụ ọ bụla, dabere na ọtụtụ adreesị IP ma ọ bụ site na iji nhọrọ ikike ikike.
Nhọrọ ndị a niile jikọtara ya na nchekwa dị elu, na-egosipụta 256-bit SSL, ụlọ ọrụ zoro ezo ụlọ ọrụ, nyocha SAS70 ụdị II na ndị ọzọ. Ngosipụta zuru oke maka ọdịnaya ahụ, nhọrọ ọchụchọ dị ike, ikike ịnweta dọkụmentị gafere ọtụtụ ngwaọrụ sitere na desktọọpụ gaa gam akporo smart phones na site na Blackberries ruo Ipads, jikọtara ya na atụmatụ mmekọrịta nwere ọgụgụ isi na-ejikọ akwụkwọ na-akpaghị aka gafee ngwaọrụ, na-eme ka ọkwa dị elu nke njikwa.
Ndị na-akwalite nọkọta mara na otu nha anaghị adabara ihe niile, ma nye ọtụtụ nhọrọ. Ọnụahịa ahụ dabere na mmasị onye ọ bụla, yana nhọrọ nhọrọ na-efu naanị 10 pasent nke mkpokọta mkpokọta SharePoint. Gaa maka ikpe ikpe n'efu ma ọ bụ zụta ozugbo.
Tags: ịkekọrịta faịlụhuddlemmekọrịta huddlemmekorita n'ịntanetị